YEYINTNGE(CANADA): Saturday, July 24
24 July 2010 ဒိုင်ယာရီ
24 July 2010 Yeyintnge's Diary Summary only...
shwedagon-dawhlasin Summary only...
burma thwe ကျွန်ူပ်တို့၏ တာဝန်ဝတ္တရား ကျွန်ူပ်တို့တိုင်းပြည်အား အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးမှ လွတ်မြောက်ရန် မူဝါဒအမျိုးမျိုးကို ကိုင်စွဲကာ တာဝန်သိသူများ အထူး ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေကြသည်။ ယခုကဲ့သို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေသည်မှာ ပုဂ္ဂိုလိက ကိုယ်ကျိုးဆန္ဒအတွက်မဟုတ် တစ်မျိုးသားလုံး အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်မှ လွတ်မြောက်ရေး အတွက်ဖြစ်သည်ကို ပြည်သူလူထု အနေနဲ့ မှတ်ထင်ယုံကြည်စေချင်တယ်။ ကျွန်ူပ်တို့သည် မြန်မာပြည်တွင် မွေးဖွားလာ၍ မြန်မာနိူင်ငံသားများ ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာ့နိူင်ငံရေးသည် ကျွန်ူပ်တို့၏ အရေးပင်ဖြစ်သည်ဟု ဦးစွာပထမ ခံယူထားသင့်လှသည်။ ထိုကြောင့်ကျွန်ူပ်တို့တွင်လည်း တာဝန်ဝတ္တရားများ ရှိသည် ။ တဖက်က လူများမှာ ကိုယ်ကျိုးစွှန့်အနစ်နာခံကာ ကြိုးစားနေပါလျှက် ကျွန်ူပ်တို့က မသိချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်လျှင် ဘယ်သောအခါမှ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်မှ ရုန်းထွက်နိူင်လိမ့်မည် မဟုတ်ချေ။ ဤနေရာတွင် တစ်ချက်ပြောပြလိုသည်မှာ နိူင်ငံအရေးဆောင်ရွက်ခြင်းဆိုသည်မှာ ပြည်သူလူထု ကောင်းစားရေးဟု ဆိုရလျှင်မမှားနိူင်ချေ ။ ထို့ကြောင့် နိူင်ငံအရေးလုပ်သူများအတွက် ပြည်သူလူထု၏ ထောက်ချက်သည် အားအကြီးဆုံးပင်ဖြစ်သည်။ နိူင်ငံကောင်းကျိုးအတွက် ဆောင်ရွက်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားလျှင် ပြည်သူလူထု၏ မျက်သာကို ကြည့်ရမည်။ ရာထူး ၊အာဏာ ၊လုပ်ပိုင်ခွင့်တို့ကိုမျှော်လင့်ခဲ့လျှင် နိူင်ငံရေးလုပ်သည်ဟု မမှတ်ယူသင့်ပေ ၊ ဌင်းတို့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် ပြည်သူကို အသုံးချခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ယနေ့လက်ရှိအာဏာရှင်အစိုးရရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပက်သက်ပြီး မြန်မာနိူင်ငံဒီမိုကရေစီ အရေးကြိုးပမ်းသူများ မှာ သဘောထားနှစ်ရပ် ကွဲလွဲလျှက်ရှိသည် ကို အားလုံးအသိပင်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အတွင်းတွင် သဘောထား ကွဲလွဲမှုများဖြစ်ကာ အနည်းငယ်သော ခေါင်းဆောင်များသည် စစ်အစိုးရ၏ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရန် ဆုံးဖြတ်ကာ ပါတီခွဲထောင်သွားသည် ။ သာမန်အရေအတွက် ကိန်းဂဏန်းအားဖြင့် ကြည့်လျှင် ထိုသို့ဖြစ်သွားရခြင်းမှာ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ အားပျော့သွားနိူင်သည် ဟု ထင်ရမည် ။ စင်စစ်ကား ထိုသို့မဟုတ် တိုင်းပြည်အတွက် တကယ်အလုပ်လုပ်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကိုယ်ကျိုးရှာလိုသူများ ကိုခွဲခြားပေးလိုက်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ မည်သူမှန်သည် မည်သူမှားသည် ဆိုသည်ကား ခက်ခက်ခဲခဲ ဝေ ဖန်နေစရာ ပင်မရှိချေ။ အကျိုးလို၍ ညောင်ေ၇လောင်း ခြင်းဖြစ်သည် ဟု ကျွန်ူပ် ရဲရဲကြီးပြောကြားရဲပါသည်။ ဘာကြောင့်ပါနည်း ။ အဖြေက ရှင်းရှင်းလေးပင်ဖြစ်သည်။ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ တွင်လည်း ပါတီများ နိူင်ရေးပါတီများ မှ လူထုစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှု များကို မလုပ်ရန် န၀တ အစိုးမှ တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တားမြစ်ခဲ့ဘူးသည်။ သို့သော် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေမှာ တရားမျှတသောကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အမျိူးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သည်ရွေးကောက်ပွဲကို န၀တအစိုးရ၏ မတရားဖိနှိပ်မှုများကြားမှလူထုကို သဘောထားကို ခံယူ၍ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အနိူင်ရခဲ့ဘူးသည်။ ယခု ၂၀၀၈ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေသည် လုံးဝကို တရားမျှတမှုမရှိ ။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် အနေဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲပါ ဥပဒေအချို့ကို ပြင်ဆင်ပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ သည်။ လက်ရှိ အာဏာရှင်များမှ ပြင်ဆင်ပေးရန် ငြင်းဆန်ခဲ့သည် ။ ထိုကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် သည် ရွေးကောက်ပွဲ မ၀င်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော် အကျိုးလို၍ ညောင်ရေလောင်းလိုသော ပုဂ္ဂိုလ်များသည် အစိုးရထံမှ ရွေးကောက်ပွဲနှင့်ပက်သက်သည့် တောင်းဆိုတစုံတရာ မပြုလုပ်သည့် အပြင် လူထုကို တပတ်ရိုက်ကာ ရွေးကောက်ပွဲကို အတည်ပြုပေးရန် အာဏာရှင်တို့နှင့် ပူးပေါင်းကာကြံစည်လျှက်ရှိသည်ကို ထင်းရှားစွာတွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဆိုတာ ကလည်း တစ်နိူင်ငံလုံးအသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပါ။ ဒီလို အဖွဲ့အစည်းက လူတွေတောင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ညင်းဆန်တာကို မထင်မရှားပါတီအချို့နှင့် ယခုမှ စတည်ထောင်သော ပါတီအချို့ ဘာကြောင့် အစိုးရရဲ့ တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ ဥပဒေကို လိုလိုလားလား လက်ခံကြတာလည်း ။ အရိုးရှင်းဆုံး နည်းလမ်းနဲ့ စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ NLD သာ ပါလာခဲ့ရင် လူထုက NLD ကို ဘဲ ရွေးချယ်မဲပေးကြမှာ ။ အဲဒီတော့ NLD ကသာ အနိူင်၇ဖို့ က ၁၀၀ % သေချာပြီးသာ။ ဒီတော့ NLD ကို မပါအောင်လုပ်မှ သာ နေရာရနိူင်မယ်လို့ တွက်ပြီး အစိုရ အလိုကျ အားလုံးတညီတညွှတ်တည်း ခေါင်းညိတ်လက်ခံခဲ့ကြတာကို ပြည်သူလူထု အားလုံးသိစေချင်တယ်။ နိူင်ငံရေး တွင် ပရိယာယ်ရှိ သည်ဆိုသည်ကား မှန်၏ ။ သို့သော ယုတ်မာကောက်ကျစ်သော လုပ်ရပ်များ ကို ပရိယာယ်ဟု ဆို၍ မရနိူင်ပါ။ ပါတီစတင်ဖွဲ့စည်းသည်နှင့် တပြိုင်နက်ထဲ လူထုကို ပုံမှားရိုက်ရန် ကြိုးစားကြ သည် သူခိုးကလူပြန်ဟစ်သော လုပ်ရပ်များထင်ထင်ရှားရှား စတင်လုပ်ဆောင်ပြသည်။ ဒါတွေကို ပြည်သူလူထု သိပြီးသား လို့ ထင်မြင်ယူဆမိတာဘဲ ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းးစုကြည်နှင့် ပက်သက်၍ တခုပြောလိုပါသေးသည် ။ လူအချို့ သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို လူထုကချစ်ခင်ယုံကြည်နေကြခြင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်းဆန်း ၏ သမီးဖြစ်သောကြောင့်ဟု ပြောဆိုလျှက်ရှိသည်။ ထို့သို့ဆိုလျှင် မေးရန် တစ်ခု ရှိပါသည် ။ ဦးအောင်ဆန်းဦးသည် လည်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ သားအရင်းဖြစ်ပါသည် ။ ဘာကြောင့် လူထုက မကြည်ညို မလေးစားကြတာလည်း ။ ဒို့တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းကြိုးအတွက် ဘာမှ မလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် တော့ ဘယ်သူကမှ လေးစားချစ်ခင် ကြည်ညို မှာ မဟုတ်ဘူး ။ ဒီလိုအောက်တန်းကျတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့ စကားနာလိုက်ထိုးတာတော့ ပါတီထူထောင်ထားသူများအနေနဲ့ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်တာဘဲ ။ နောက်တစ်ခု ပြည်သူလူထို့ ကို အသိပေးချင်သေးတယ်။ အချို့ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်မည့် ပါတီ အချို့ဆိုလျှင် ပြည်သူများ လေးစားချစ်ခင်လို့ Facebook တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံကို တင်ထားတာ ကိုပင်ပုံကို ဗန်းပြ၍ လုပ်စားနေသည်ဟု အာဏာရှင်တို့လေသံနှင့် တထပ်တည်းလိုက်လာ အတိုခိုးပြောဆိုနေကြပါသည်။ အာဏာရှင်များက တပ်မတော်သားများ စိတ်ထဲကို စွဲနေအောင် ရိုက်သွင်းပေးထားသည်မှာ " နိူင်ငံရေးလုပ်သူများသည် စားစရာ မရှိသောကြောင့်လုပ်နေကြခြင်းပင်ဖြစ်သည် " ။ ကျွန်ူပ်တို့ ယခုကဲ့သို့စာရေးသည်ကို ပင် ငွေရ၍ စာရေးသည်ဟု လည်းကောင်း တပ်မတော်သားများ ထင်မြင်ယူဆအောင် အာဏာရှင်တို့ စနစ်တကျ ပုံသွင်းခံထားရသည့် တပ်မတော်များကဲ့သို့ လိုက်လံ အတိုခိုးပြောဆိုနေကြသည်ကိုယနေ့အခါတွင် များစွာ တွေ့ရှိရပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆိုတာ လူထုက အသိအမှတ်ပြုထားတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ။ လက်နက်ကိုင်ထားတဲ့အာဏာရှင်တွေ သေနတ်ကြားထဲမှာ မကြောက်မရွှံ့ ပြည်သူလူထု လိုအပ်တာကို တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်။ အခုချိန်ထိလည်း မတရားတာကို မတရားဘူးလို့ ပြည်သူလူထုဘက်က ရဲရဲ ၀င့်ဝင့်ရပ်တည် ပေးနေတဲ့လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတာ မမေ့ကြပါနဲ့။ ယနေ့ အာဏာရှင်စစ်အစိုးရက ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်ပြီး အသိအမှတ်ပြု ယှဉ်ပြိုင်တာဟာ လက်ရှိအစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို အားပေးကူညီလိုက်တာဘဲ။ တနိူင်ငံလုံးမှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူအားလုံးက ထောက်ခံမဲပေးလည်း အုပ်ချုပ်ခွင့်အာဏာ မရဘူးဆိုတာ ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေမှာ အထင်အရှားပြထားပြီးသားဘဲ။ နေရာတကာ မှာ စစ်တပ်က က အာဏာအရှိဆုံးဆိုတဲ့ ဥပဒေတွေချည်းဘဲ ပြဌာန်းထား ပါလျှက်ကယ်နဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ၀င်တယ်ဆိုတာ ဘယ့်သူ့အတွက်လည်း စဉ်းစားသာကြည့်ကြပေတော့။ အချို့ကလည်း ပြောကြတယ် နှစ် (၂၀) တော်လှန်လာတာတောင် မပြောင်းလဲဘူး တဲ့ ။ အစိုးရ နဲ့ပူးပေါင်းသင့်တယ်ဆိုပြီး ပြောကြတဲ့သူတွေလည်း ရှိတာဘဲ။ တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆို တရားမျှတတဲ့ဥပဒေမျိုးဘဲ ရှိသင့်တယ်။ တရားမျှတခြင်းမရှိဘဲနဲ့ ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်တာ ဟာ အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကို ပိုမိုအသက်ရှည်အောင် ၀ိုင်းဝန်းကြိုးစားပေးတာနဲ့ အတူတူပါဘဲ။ အချို့ကစဉ်းစားတာတွေ မှားနေကြပြီလို့ထင်တာဘဲ ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ 1990 ပြည့်နှစ် မြန်မာနိူင်ငံအခြေအနေနဲ့ လက်ရှိမြန်မာနိူင်ငံအခြေအနေ ဟာ မတူဘူးဆိုတာလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်။ ကမ္ဘာ့နိူင်ငံအသီးသီးရဲ့ ဖိအားဒဏ်ကို မခံနိူင်ကြလို့ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးတယ်ဆိုတာလည်း အားလုံးအသိဘဲ။ အတွေးမချော်စေချင်ကြဘူး ။ ဒီမိုကရေစီ လိုချင်ရင် ဒီမိုကရေစီရနိူင်မည့် နည်းလမ်းတွေနဲ့ဘဲ ကြိုးစားကြပါ။ လမ်းလွှဲကြီးကို မလိုက်မိကြပါစေနဲ့ ဆိုပြီး သတိပေးချင်ပါတယ်။ တခါတလေ ရှင်းနေလွန်းရင် လူတွေ ဟာ မရှင်းလင်းတဲ့ အတွေးတွေ နဲ့ တွေးမိတတ်ကြတာ လူ့သဘာဝပါ။ နောက်တစ်ခုက လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ တပ်တွင် မတည်ညိမ်မှုများကို လည်း မေ့မထားသင့်ဘူး ။ စစ်မှန်တဲ့ အရေးဆိုဖို့ စစ်မှန်တဲ့အတွေးတွေနဲ့ ဦးဆောင်ကြမှ အောင်မြင်မှာ ။ သတိလေးသာ အစဉ်ကပ်ပြီး ပုစ္စုပ္ပန်ကို သာ တည့်တည့်ကြည့်ကြဆိုတဲ့ ကျွန်ူပ်တို့ မြတ်စွာဘုရား ဟောကြားထားတဲ့ တရားလေးကို လည်း လက်မလွတ်ကြပါနဲ့။ ဒါ့အပြင် ကိုယ်ကျိုးစီးပွား နဲ့ရာထူးအာဏာရရှိနိူင်တယ်ဆိုတဲ့ အတ္တအခွံက ဖုံးအုပ်ထားတော့လည်း ငါလျှောက်တဲ့လမ်းက မှန်တာပါဆို ပြီး ကြွေးကြော် မာန်ဝင့်ချင်ကြပါသေးတာတော့ မကောင်းပါဘူး။ လက်ရှိအစိုးရ ကသာ တကယ်တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပေးမယ်ဆိုရင် အပြစ်မရှိတဲ့ နိူင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေကို ပြန်လွှတ်ပေးနေတာကြပါပြီ။ လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခဥပဒေကို အတည်ပြုတုန်းက လည်း တအိမ်တစ်ယောက် မလာမနေရ စနစ်နဲ့ အရှက်မရှိလာခိုင်းပြီး လူထုက သဘောတူလက်ခံပါတယ်လို့ တရားဝင်ကြေငြာခဲ့တယ် အားလုံးမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဘဲ။ အခုကိစ္စမှလည်း နေရာလိုချင်လို့ ရွေးကောက်ပွဲကို ၀င်တာက လူတစ်စု ၊ အစိုးရ ကြေငြာချက်ထုတ်မှာက အနိူင်ငံလုံးလက်ခံပါတယ် ဆိုတဲ့ အပြောမျိုး။ ဒါမျိုးတွေ မဖြစ်ပွားအောင် အစကတည်းက ကင်းကင်ရှင်းရှင်းနေကြ ။ ပြည်သူလူထု တကယ်လိုးလားတောင့်တ တဲ့ တရားမျှတပြီး လူအခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ ရရှိနိူင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ကို လိုချင်တာပါဆိုရင် အာဏာရှင်စနစ်ကို ထောက်ပံ့ပေးမည့် မည့်သူ့ကိုမဆို ရန်သူအဖြစ်သာ သဘေားထားပြီး ပြတ်ပြတ်သားသားဆန့်ကျင်ကြ ။ နောက်တချက်က ပြည်သူချစ်သော အနုပညာရှင်များကိုလည်း တစ်ခုလောက် တောင်းဆိုပါရစေ။ လက်ရှိအစိုးက ခင်ဗျာတို့ အောင်မြင်ကျော်ကြား လာမှ ခေါ်ယူ အသုံးချပြီး ၀ါဒဖြန့်ခိုင်းတာပါ။ ခင်ဗျာတို့ အနုပညာကို လေးစားလို့ အစဉ်တစိုက် အားပေးလာတဲ့ လူထုပရိသတ်ရဲ့ ရင်ဘတ်ကို ဆောင့်ကန်လိုက်သလို မျိုးလုပ်ကြတာတော့ တကယ့်ကိုစိတ်မကောင်းပါဘူး ။ လက်ရှိအစိုးရဆီ က ရလာတဲ့အခွင့်အရေးတွေ အတွက် ပြည်သူတွေ မျက်လုံးကို အဆိပ်နဲ့ပက်ရင်တော့ ပြည်သူ့ရန်သူဘဲလို့သတ်မှတ်ရမှာပါ။ ဒီနေရာမှတော့ ဘယ်သူတွေကို ညွှန်းဆိုတယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးသားမို့ ရှင်းမပြတော့ပါဘူး။ ပြည်သူလူထုအနေနဲ့လည်း ဒီလို အနုပညာရှင်မျိုးကို အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးကို အားပေးဝါဒဖြန့်သူများရဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသားဆန့်ကျင်ကြပါလို့ကျွန်တော်လေးနက်စွာ တိုက်တွန်းပါတယ်။ ပြည်သူလူထု အနေနဲ့လည်း အခုချိန်ဟာ အရေးကြီးတဲ့ အချိန်ကို ရောက်နေပြီ ဖြစ်တဲ့အတွက် စည်းလုံးညီညွှတ်ကြပါ။ တကယ့်အစစ်အမှန် ပြည်သူလူထုကောင်းစားရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးနိူင်မည့် ခေါင်းဆောင်ကို လူထုကသာ ရွေးချယ်တင်မြှောက်နိူင် မှာဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းပြည်အရေး တကယ်ဆောင်ရွက်မည့် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ပြည်သူတွေရဲ့ စည်းလုံးခြင်းအင်အား နဲ့ ထောက်ပံ့ထားမယ်ဆိုရင် အာဏာရှင်စနစ် မကြာခင် ပြုတ်ကျ တော့မှာ အမှန်ဘဲ။ ပြည်သူလူထု လိုလားတောင်းတနေတဲ့ တရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲ့ကို တကယ်စစ်မှန်စွာ ကျင်းပချင်ကြတယ်ဆိုရင် လူထုက တောင်းဆိုရမှာပါဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလိုတောင်ဆိုနိူင်ဖို့ အတွက် လိုအပ်ရင် ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ဆောင်ရွက်နိူင်အောင် ကြိုးစားကြပါ။ နိူင်ငံ့အရေး ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်လို့ အကျိုးအမြတ်များကို ထည့်မတွက်ကြပါနဲ့။ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ လိုအပ်သလို ပါဝင်ကူညီကြပါ။ ယနေ့ မတရားဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ခြင်း ခံထားရတဲ့ လူအားလုံးဟာ အာဏာရှင်စနစ်ကို ရဲဝင့်စွာ ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြလို့ ထောင်ထဲရောက်ပြီး ဒုက္ခဆိုးများကို ခံစားနေကြရပါတယ်။ ယနေ့ အာဏာရှင်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ပြီး တိုင်းပြည်အကျိုးကို တကယ်သယ်ပိုးရွက်ဆောင်သူတွေကို အစိုးရက ဘယ်လိုဒုက္ခပေးထားတယ်ဆိုတာ အားလုံးအသိပါ ။ သူတို့တွေကို တင် မကဘူး ၊ ဆွေမျိုးအသိုင်းအ၀ိုင်းတွေကိုပါ အားလုံး ဒုက္ခပေးနေတဲ့ အတွက် ထောင်ထဲရောက်နေတဲ့သူတွေကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မထောက်ပံ့နိူင်ကြဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တော်တို့သာ တတ်နိူင်တဲ့ဘက်က တိုင်းပြည်အကျိုးကို သယ်ပိုးဆောင်ရွက်သူတွေကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးထားကြမယ်ဆိုရင် သူတို့တွေမှာ အင်းအားတွေ ပိုမိုပြည့်ဝလာမှာ အမှန်ပါဘဲ ။ အဲဒီလူတွေ လွတ်မြောက်ရေး အတွက် တောင်းဆိုပေးတာ ဟာ မိမိတို့လွတ်မြောက်ရေးကို ဆောင်ရွက်တာနဲ့ အတူတူပါဘဲဆိုတာ ပြတ်ပြတ်သားသား သိထားကြပါ။ ဒီနေ့ဒီချိန်က စပြီး ပြည်သူလူထု အနေနဲ့ နိူင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ထမ်းဆောင်ကြပြီး အာဏာရှင်စနစ်ကို စည်းလုံးညီညွှတ်မှုအင်အားများဖြင့် စတင်ဖြိုဖျက်ကြပါစို့လို့ လေးနက်စွာ သတိပေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါသည် ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထု နှင့် ကျောင်းသားကျောင်းသူ အပေါင်းတို့ခင်ဗျာ။ မကြာခင်မှာ စတင်တော့မယ့် အာဏာရှင်စနစ်ဆိုး အားဆန့်ကျင်မည့် အစီအစဉ်များကို လည်း ပြည်သူများသိရှိစေရန် အသေးစိတ် အစီအစဉ်များကို ဖြန့်ဝေပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုတင် အသိပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်ူပ်သည် မည့်သည့်ပါတီဝင်မှ မဟုတ်သလို နိူင်ငံရေးပညာရှင်လည်း မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ူပ်ရေးသားသော စာများကို ပညာရှင်များ အနေဖြင့် သိရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးကို အသိပေးလို၍ ရေးသားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ဤစာပါ အချက်အလက်များ သည် မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ ခိုင်းဆိုချက်ကြောင့် ရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါ။ ခင်မင်လေးစားလျှက် ဗမာ့သွေး
စိုးနေလင်းSaturday, July 24, 2010 စစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရရဲ့ ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာ ဘယ်နေ့ဘယ်ရက် ကျင်းပမယ်မှန်းမသိရသေးပေမယ့် ၂ဝ၁ဝ ခုနှစ်ကို ထက်ဝက်ကျော်စွန်းလာပြီဖြစ်လို့ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ကလွဲပြီး ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးလို့ ယုံကြည်ကြတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ နိုင်ငံရေး သမားတွေရဲ့အသံတွေကို ပိုပြီးကြားလာရပါတယ်။ တချို့က နည်းနည်းမကျေနပ်တဲ့လေသံတွေ၊ တချို့ကတော့ ရေရွတ်ညဉ်းတွားသံ တွေပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အသံမှ အားကောင်းမောင်းသံ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဒီမိုကရေစီရေး အတွက်အားကိုယ်း အားထားပြု လောက်စရာရှိတာမတွေ့ရ မကြားရပါဘူး။စစ်အစိုးရဟာ စစ်တပ်အားကိုးနဲ့ ရက်စက်ကြမ်းတမ်းတယ်၊ အကြမ်းဖက် နှိမ်နှင်းတတ်တယ်။ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲတယ်ဆိုတာ မှန်ပါ တယ်။ ဒါတွေကြောင့် စစ်အစိုးရခွင့်မပြုရင် ဘာမှမလုပ်ဘူး။ ခွင့်ပြုသလောက် အတိုင်းအတာအတွင်းက ခွင်ပြုထားတဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေး တွေကိုပဲ အကောင်းဆုံးလုပ်ကြရမှာပေါ့။ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ ဆိုပြီးစစ်အစိုးရကို မတရားပြုချင်တိုင်းပြု လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်တာကို ခေါင်း ငုံ့ခံကြမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ ပြည်သူလူထုကြီးတရပ်လုံးရာစုနှစ်ဝက်လောက် ဒုက္ခဆင်းရဲအမျိုးမျိုးခံပြီး စောင့်မျှော်နေခဲ့တဲ့ လွတ်လပ် တရားမျှတ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတခုကို ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ ရရှိနိုင်စရာအကြောင်း မရှိဘူးဆိုတာကတော့ နိုင်ငံရေးအတွေ့ အကြုံ ရှိတဲ့သူတိုင်း နားလည်ပြီးဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ်။ကျနော်တို့ရဲ့အဘိုးအဖွားတွေ အဖေ အမေတွေ နောင်တော် အမတော်တွေ ခြောက်တိုင်းမကြောက်ခဲ့ကြပါဘူး၊ ချော့တိုင်းလည်း မ ပျော့ခဲ့ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ဟာ အလွန်အင်အားကြီးတဲ့ အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲ့ကို တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့သလို အလွန် ရက်စက်ကြမ်းတမ်းအင်အားကြီးမားတဲ့ ဖက်ဆစ်စနစ်ကလည်းလွတ်မြောက်အောင်တိုက်ခိုက်တွန်းလှန်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ တတိုင်းပြည် လုံး ပြည်သူလူထုတရပ်လုံး လွတ်လပ်ရေးရခဲ့ကြပါတယ်။ အထူးပြောနေစရာမလိုအောင် ခိုင်မာတဲ့ သမိုင်းစာမျက်နှာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့ ကျနော်တို့ခေတ်မှာတော့ ကျနော်တို့သက်တန်းတခုလောက်နီးနီး စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆိုးအောက်မှာ အမျိုးသား စစ်အာဏာ ရှင်တွေရဲ့သံဖနောင့်အောက်မှာ ကျရောက်နေခဲ့ရပါတယ်။ ကျရောက်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်အောက်က လွတ်မြောက် ရေးအတွက် အသက်၊ ဘဝ၊ သွေးချွေး ပေးဆပ်တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့သူတွေ၊ ပေးဆပ်နေဆဲသူတွေရှိသလို ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအခြေပြု နေ သာသပ လေညာက တိုင်းပြည်ရဲ့အရေး ဒီမိုကရေစီရေး လူ့အခွင့်အရေးတွေကို ကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုနေခဲ့ကြသူတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ တချို့ကတော့ ခြံစည်းရိုးပေါ်ခွထိုင်ပြီး အရေးသာမယ့်ဘက်ကိုခုန်ချမယ့်သူတွေ၊ တချို့ကတော့ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ ဆိုပြီး ကောက်သင်းကောက်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေထက်ပိုပြီးဆိုးတဲ့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားအတွက် ပြည်သူလူထုတ ရပ်လုံးကိုသစ္စာဖောက်ပြီး ဖိနှိပ်သူစစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်း ကိုယ့်ပြည်သူလူထုကိုကိုယ်ပြန်ပြီး ဒုက္ခပေးနေကြတဲ့ အသားထဲက လောက်တွေလည်း အများကြီးရှိနေကြပါတယ်။ဒီလို ပကတိအခြေအနေအောက်မှာ နိုင်ငံရေးသမားအမည်ခံပြီး နိုင်ငံရေးပါတီထောင် ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြသူတွေ၊ တ သီးပုဂ္ဂလ နိုင်ငံရေးသမားတွေ၊ နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေအနေနဲ့ကျင်းပပေးမယ့် စစ်အစိုးရရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကို အသေ အချာလေ့လာသုံးသပ် အကဲဖြတ်သင့်ပါတယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာ ဘယ်အခြေခံဥပဒေ ကိုကျင့်သုံးပြီးကျင်းပမှာပါလဲ။ ပြဋ္ဌာန်းပေး ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေ လွှတ်တော်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေ နိုင်ငံရေးပါတီဆိုင်ရာ ဥပဒေတွေဟာ တရားမျှတမှန်ကန်မှု ရှိ ရဲ့လား ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်တွေနဲ့ ညီညွတ်ရဲ့လားဆိုတာကို စစ်ဆေးကြည့်ရှုသင့်ပါတယ်။ ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာလည်း အသွင် သဏ္ဌာန်ကိုမဟုတ်ပဲ အနှစ်သာရကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးရပါမယ်။ အပြော အပြ ထက် အလုပ်ကိုကြည့်ရပါမယ်။ စစ်အစိုးရကအပြနဲ့ အ ပြောသက်သက်ပါ စစ်အစိုးဟာ သူ့ရဲ့အပြောနဲ့အပြအတိုင်းသာလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ခုပြောနေရတဲ့ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာလည်း ရှိ လာစရာအကြောင်းမရှိပါဘူး။ အပြောတခြား အလုပ်အခြား အပြတခြား အလုပ်တခြားအမြဲတမ်းလုပ် ပြည်သူလူထုကြီးနဲ့ နိုင်ငံတကာ ကို လိမ်နေခဲ့တဲ့ လူလိမ်လူညာ အစိုးရဖြစ်နေလို့သာ ဒီလိုပြောနေရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းပါးသိပ်ရှည်လျှားသွားမှာစိုးတဲ့အတွက် ပြောလိုရင်းအသံတွေအကြောင်း ပြန်ပြောပါ့မယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီထောင်ထားကြတဲ့ ပါ တီတွေရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရသူတွေ ပြောနေကြတာတွေကိုကြည့်ရအောင်ပါ။ မကြာသေးခင်ကလေးကမှ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကနေ ခွဲထွက်ပြီး နိုင်ငံရေးပါတီသစ်အဖြစ် တည်ထောင်ထားတဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအင်အားစုပါတီရဲ့တာဝန်ရှိသူ ဦးသိန်းညွန့် ကို တွေ့ဆုံမေးမြန်းပြီး ရန်ကုန်တိုင်းမ်းသတင်းဂျာနယ်မှာ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားတာကို ဖတ်ခွင့်ရလိုက်ပါတယ်။ အဲဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း မှာ ဦးသိန်းညွန့်က “လွှတ်တော်ထဲရောက်ရင် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့တွေ အင်အားစုပါတီတွေနဲ့ ပူးပေါင်းပြီးလုပ်သွားမှာပါ။ ပြည်သူလူထု ဖြစ်စေချင်တာတွေကို လွှတ်တော်မှာပြောနိုင်မယ်၊ ဥပဒေတွေကိုပြင်နိုင်မှာပေါ့” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျနော် အတော်အံ့သြပါတယ်။၂ဝဝ၈ ခု စစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအခြေခံပြီး ကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ တကယ်လို့ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခံရရင် စစ်တပ် ကိုယ်စားလှယ်၂၅% နဲ့ စစ်တပ်လက်ကိုင်ဒုတ်ကြံ့ဖွံ့ပါတီက ပြည်သူလူထုနဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကိုခြိမ်းခြောက်ပြီး အာဏာသုံးမဲရအောင် ယူပြီး လွှတ်တော်ကုလားထိုင်မှာဝင်ထိုင်လာကြမယ့် ကြံ့ဖွံပါတီကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ထောက်ခံမှုနဲ့ ပြည်သူလူထုလိုလားချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ် အသေအချာချည်ပြီးတုပ်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ထည့်သွင်းရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ မတရားတဲ့ဥပဒေတွေကို ပြင် ဆင်နိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်လောက်အောင်ကို ရိုးအလွန်းရှာတယ်လို့ပဲ ပြောရမလား နိုင်ငံရေးချွတ်ခြုံကျလွန်းတယ်လို့ပဲ ပြောရမလား။ စစ်အစိုးရအကြောင်းကို ရာစုနှစ်ဝက်လောက်အတွေ့အကြုံနဲ့ သာမန်ပြည်သူလူထုတောင် အလွယ်တကူသိမြင် သဘောပေါက်နေကြ ပါရဲ့နဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်လို နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတခုရဲ့တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာလုပ်လာခဲ့ဖူးတဲ့ ဦးသိန်းညွန့် လို လူမျိုးက ဒီလိုတွေးမြင်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင် တခြားအတွေ့အကြုံနုနယ်သေးတဲ့ လူငယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေ နိုင်ငံရေးသမားတွေကိုတော့ အထူးပြောနေစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး။ ဒီထက်ဆိုးတဲ့အဖြေလည်းရှိပါသေးတယ်။ မေးသူက ဦးသိန်းညွန့် အနေနဲ့ ဥပဒေတွေ ကို ပြင်နိုင်မယ်လို့ပြောခဲ့ပေမယ့် တချို့ကတော့ပြင်လို့မရနိုင်ဘူးလို့ပြောနေကြတယ်၊ အဲဒီလိုအမြင်ကွဲလွဲနေတဲ့အပေါ်ဘယ်လိုမြင်ပါသ လဲလို့ မေးတဲ့အဖြေကို ဦးသိန်းညွန့်က “တပ်မတော်အပေါ် မြင်တဲ့အမြင်ကွဲသွားတာဘဲ။သူတို့က လက်ရှိ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်များ နောင်အနာဂါတ်ခေါင်းဆောင်များဟာ ဒီအခြေခံဥပဒေကြီးကို တရားသေဆုပ်ကိုင် ထားမယ်လို့ သူတို့ထင် ကြတယ်။ ကျနော်တို့က အဲလိုမထင်ဘူး။ ပြောင်းလဲလာတဲ့ ပြည်တွင်းပြည်ပအခြေအနေ နောက်တခါ ကျနော် တို့ဘက်ကလဲ တပ်မတော်အပေါ် သဘောထားမှန်ပြီးတော့ အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးအတွက် တိုင်းပြည်အမှန်တကယ် တိုး တက်ခေတ်မီရေးအတွက်ကို လွှတ်တော်ထဲရောက်လာမယ့် တပ်မတော်သားတွေ အရင်ဆုံးနားလည်မှုရမယ်။ ဒီနာမည်မှုနဲ့ တိုင်ပြည် ကောင်းဖို့အတွက် ဒီအချက် ဒီတွေက် ကိုတင်ပြရင် ဒါတပ်မတော်ဘက်ကလည်း စဉ်းစားလိမ့်မယ်။” လို့ အဖြေပေးသွားပါတယ်။ တပ် မတော်အပေါ်တခြားသူတွေမြင်နေကြသလို၊ ရဟန်းရှင်လူ ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးမြင်နေကြသလို သူတို့ပါတီက မမြင်ဘူး၊ သူ့အ နေနဲ့ မမြင်ဘူးလို့ အတိအလင်းပြောသွားတာပါ။ အော် တပ်မတော်ရဲ့သဘောထားအမှန်ကို မသိရှာသေးဘူးလို့ပဲ စုတ်သပ်ရမလား။ ဖြစ်မှဖြစ်ရပလေ ဦးသိန်းညွန့်ရယ်လို့ပဲ ညည်းချင်းချရမလား။ စဉ်းစားမရနိုင်အောင် အံသြရပါတယ်။ပြုပြင်မရအောင်ကမ်းကုန်နေတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်တွေကို ပြုပြင်ရေးလုပ်ဖို့ သဘောထားပြောင်းလဲလာအောင်လုပ်ဖို့ ကြိုးစားချင် ပုံရပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကပဲ တပ်မတော်အပေါ်ထားတဲ့သဘောထား မှားနေသယောင်ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ တပ်မတော်နှစ် ပေါင်း ၅ဝ နီးပါး ဘာတွေလုပ်လာခဲ့တယ်၊ ပြည်သူလူထုကိုဘယ်လို ဆက်ဆံလာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ အများမြင်သာ ထင်ရှားရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်လို့ ကျနော် အထူးဖော်ပြမနေတော့ပါဘူး။ကျနော်တင်ပြလိုရင်းကတော့ အခု ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲကို ရှိတာကမရှိတာ ထက်ပိုကောင်းတယ်၊ လွှတ်တော်ထဲရောက်မှ ပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးလုပ်လို့ရတယ် လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုပြီး အသွင်သဏ္ဌာန်အရပေးထားတဲ့ စကားလုံးအရပေးထားတဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ယုံ ကြည်ကြ၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ဖို့တာစူနေကြတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ နိုင်ငံရေးသမားတွေက စစ်အစိုးရထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပ ဒေတွေဟာ မသင့်လျှော်ပါဘူး အခွင့်အရေးတွေကို ဘက်လိုက်ပေးနေတာဟာ မတရားပါဘူး၊ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကိုထောက်ခံမဲပေးကြဖို့ အစိုး ရကိုယ်တိုင်က ပြည်သူလူထုကို ဖိအားပေးခြိမ်းခြောက် စည်းရုံးနေတာတွေဟာ မဖြစ်သင့်ပါဘူးစသည်ဖြင့် ပြောဆိုနေတဲ့လေသံတွေ ဟာ အလွန်အားနည်းပျော့ညံ့နေတာ ကြားရပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ကြမယ့် ပါတီတွေ ကိုယ်စလှယ်တွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုအခွင့် အရေးမျိုးရှိရမယ်။ အချိန်ဘယ်လောက်ပေးရမယ်။ အစိုးရက ဘာတွေပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်လို့ ခပ်တင်းတင်းတောင်းဆိုတာ၊ အစိုးရက အဲဒီတောင်းဆိုမှုတွေကို ဆောင်ရွက်မပေးဘူးဆိုရင်တော့မိမိတို့က ဘာလုပ်ရလိမ့်မယ် သပိတ်မှောက်ရလိမ့်မယ် စသည်ဖြင့် တုန့်ပြန်ရာဇသံပေးတာမျိုးလုံးဝမကြားရသလောက်ပဲဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီအစား ဘာမှမတုန့်ပြန်တော့လည်း ပေးထားတဲ့ အခြေအနေအ တွင်းကပဲ အကောင်းဆုံးလုပ်ရမှာပေါ့၊ ဘာတတ်နိုင်မှာလဲဆိုတဲ့ စစ်မရောက်ခင်မြားကုန်နေတဲ့အသံတွေ၊ အလျှော့ပေးအညံ့ခံတဲ့ အ သံတွေကိုပဲ ရေရွတ်ပြောဆို ညည်းညူ နေကြတာကို ကြားနေရပါတယ်။အဲဒီလို နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတွေကို ကျနော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် ပြည်သူလူထုက ဘယ်လိုများ အား ကိုယ်းအားထား ပြုကြရမှာပါလဲ။ စစ်အစိုးရအပေါ် သဘောထားမှန်မှန်ကန်ကန် ထားရမယ်ဆိုတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ စစ်အစိုးရကတိုင်း ပြည်အပေါ် ပြည်သူလူထုအပေါ် သဘောထားမှန်မှန်ကန်ကန်ထားဖို့ကိုရော တိုက်တွန်းတောင်းဆိုကြဖူးပါသလား။ ပြန်စဉ်းစားကြည့် ကြစေချင်ပါတယ်။ လက်နက်ချအညံ့ခံရေးအတွေးအခေါ်ကို ကိုင်စွဲပြီး စစ်အစိုးရက ငါးခြောက်ဆို ဖုတ်ပြီးသားပါဘုရား လုပ်နေကြ မယ်ဆိုရင်တော့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံအရေးဟာ မတွေးဝံ့စရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အမျိုးသားစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ သံဖနောင့်အောက် မှာ ဆွေစဉ်မျိုးဆက် စစ်ကျွန်ဖြစ်ကြရပါလိမ့်မယ်။ဘယ်စစ်အာဏာရှင်ကမှ သူတို့ကိုင်စွဲထားတဲ့အာဏာကို သူတို့စိတ်လိုလက်ရ စွန့်လွှတ်ပေးလိုက်ရိုးထုံးစံ မရှိခဲ့ဘူးဆိုတာ သမိုင်းစာ မျက်နှာတွေပေါ်မှာ အထင်အရှားတွေ့နိုင်ပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်အစိုးရကို ပြည်သူလူထု တရပ်လုံးအင်အားနဲ့ ဆန့်ကျင်အာခံ တွန်း လှန်နိုင် အောင်ကြိုးစားကြရမယ့်တာဝန်ဟာ ဒီကနေ့ ပြည်တွင်းပြည်ပက နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အဖွဲ့အစည်းတွေ လက်နက်ကိုင်အင်အား စုတွေမှာအဓိကတည်ရှိနေပါတယ်။ ပြည်သူလူထုကြီးတရပ်လုံးကလည်း စစ်ကျွန်ဘဝ အကျရောက်မခံပဲ ကိုယ်စီကိုယ်ငှ မတရားတဲ့ အမိန့်အာဏာတွေကို ဖီဆန်ငြင်းဆန်ကြဖို့ တညီတညွတ်တည်းကြိုးစားကြဖို့ လိုအပ်ပါကြောင်း။ ။ စိုးနေလင်းhttp://www.naytthit.com/articals/2010/july10/snl-july24.html
ကဗျာဆရာ စောဝေ သရော်စာ စာအုပ် နှင့် ဝတ္ထုတို ပေါင်းချုပ် စာအုပ် ထုတ်မည်
(၁၉၈ဝ) ကျော် ကာလ များက မဂ္ဂဇင်း များတွင် ဝတ္ထုတို ရေးသား ခြင်းဖြင့် စာပေ လောကသို့ ဝင်ရောက် လာသော ကဗျာဆရာ စောဝေသည် (၂ဝ၁ဝ) ခုနှစ် အတွင်း ချစ်စဖွယ် သရော်စာများ နှင့် မဂ္ဂဇင်း ဝတ္ထုတို များကို လုံးချင်း အဖြစ် ထုတ်ဝေ တော့မည် ဟု ကဗျာဆရာ စောဝေက ပြောဆိုကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။ '' သရော်စာ စာအုပ် ကတော့ စိတ်ကူး ချိုချို စာအုပ်တိုက်က ထွက်မှာပါ။ ကျွန်တော် ဂျာနယ် တွေမှာ ရေးခဲ့တဲ့ သရော် စာတွေက စုထုတ် တာပါ'' ဟု ဆိုသည်။ ''ဝတ္ထုတို ပေါင်းချုပ် ကတော့ စာပေလောက ကနေ ထုတ်မှာပါ။ အခု ကျွန်တော် ရေးခဲ့ တာတွေကို ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် စိစစ် နေပါတယ်။(၁၉၈၄) လောက် ကတည်းက ကျွန်တော်က စာပေ လုပ်သား မဂ္ဂဇင်း ရေးခဲ့ ပါတယ်။ နောက်ပိုင်း မှာတော့ ကျွန်တော် ကဗျာကို ပိုရေးဖြစ် ပါတယ်'' ဟု ကဗျာဆရာစောဝေ မှ လျှပ်တစ်ပြက်သို့ အတည်ပြု ပြောဆိုကြောင်း လျှပ်တပြက် ဂျာနယ် တွင် ဖော်ပြ ထားသည် ကို တွေ့ရှိ ရသည် ။ကဗျာဆရာစောဝေ သည် ဖြူး မှ မိတ်ဆွေများ စာကြည့် အသင်း ကို ထူထောင်သူ များတွင် ပါဝင်ခဲ့သူ ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြောင်းရွှေ့လာကာ HIV/AIDS ကူးစက် ခံရတဲ့ မိဘမဲ့ ကလေးများ အတွက် ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေ ပေးတဲ့ အဖြူရောင် သက်တန့် အဖွဲ့ကို ဦးဆောင်ပြီး စာပေ အနုပညာ နှင့် ပတ်သက်သော အလုပ် များကို လုပ်ဆောင် နေသူ ဖြစ်သည်။၂၀၀၈ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၂၁ ရက်နေ့ထုတ် အချစ် ဂျာနယ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေကို ဝေဖန်တယ် ဆိုတဲ့ စွဲဆို ချက်နဲ့ ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ် အပြစ်ပေး ခံခဲ့ ရပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ် မေလ (၂၆) ရက်နေ့က ရမည်းသင်း ထောင် ကနေ ပြန်လည် လွတ်မြောက် လာကာ ယခု ရန်ကုန်မြို့၊ ရွှေဂုံတိုင် လမ်းမ ပေါ်တွင် အဓိပတိ ထမင်းဆိုင် ဖွင့်လှစ် ထားပြီး မိသားစု နှင့် အတူ နေထိုင်လျက် ရှိသည်။ကဗျာ ဆရာ စောဝေ သည် ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဖိနှိပ်မှုကြား ကနေ မိမိ အမြင်ကို ရဲရဲ ရင့်ရင့် ဖော်ထုတ်သူ အဖြစ် အမေရိကန် အခြေစိုက် လူ့အခွင့် အရေး စောင့်ကြည့် လေ့လာရေး အဖွဲ့ ကနေ Hellman / Hammett ဆုကို အပ်နှင်း ခံခဲ့ရသူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။၂၄ . ၇ . ၂၀၁၀http://www.htwd.info/2010/07/poet.html
ရန်ကုန်တိုင်း ဒု-တိုင်းမှူးသို့ ဆရာတော် ဦးခေမာသာရ...
ကဗျာဆရာ စောဝေ သရော်စာ စာအုပ် နှင့် ဝတ္ထုတို ပေါင်းခ...